चितवन प्रहरीमा ४४ वटा हतियार मात्रै बुझाइयो , बाँकी सय बटा कता गए ? – Saurahaonline.com
चितवन प्रहरीमा ४४ वटा हतियार मात्रै बुझाइयो , बाँकी सय बटा कता गए ?
चितवन मंसिर १६ । चितवनमा अनुमति लिएर राखिएका ४४ वटा हतियारहरु प्रहरीलाई बुझाइएको छ । आगामी मंसिर २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गराउनको लागि स्थानीय प्रशासनले हतियार बुझाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।
मंसिर १४ गतेसम्म जिल्लाका ४४ स्थानबाट हतियार बुझाइएको प्रहरीले जनाएको हो । कात्तिक मसान्तसम्म हतियार बुझाउन आग्रह गरिएको भएपनि प्रहरीले अहिलेसम्म हतियार बुझ्दै आएको र अब पनि हतियार नबुझाए कारबाही गर्ने प्रहरीको भनाइ छ ।
चितवनमा एक सय ४४ वटा हतियार दर्ता भएको तथ्यांक भएपनि ४४ वटा मात्रै हतियार बुझाउँदा यसले सुरक्षा खतरा निम्त्याउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा २९ वटा मात्रै हतियार बुझाइएको थियो । हतियारको अनुमति पत्र लिएका व्यक्तिहरु विदेश रहेका कारण पनि सबै हतियार प्रहरीलाई नबुझाइएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ ।